Pacific-AA Online Shop | MediBio-Kid Powder (10's) Detail
MediBio-Kid Powder (10's)
2,720 Kyats 2,600 Kyats
၅နှစ်မှ ၁၂နှစ်အတွင်းကလေးများတွင် အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ပြည့်ဖောင်းခြင်း စသည့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြသနာများ၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် အူလမ်းကြောင်းအကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်း မူမမှန်ခြင်းနှင့် ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခမ်း၍ နုံးခွေခြင်းအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနို်ငပါသည်။
Composition Each sachet (1g) contains:
Probiotic Blend .....................................62.5 mg
Bacillus subtilis......................................25 million CFU.
Streptococcus faecium .........................225 million CFU.
Thiamine hydrochloride 0.5 mg, Riboflavin 1.0mg,
Pyridoxine Hydrochloride 1.0mg,
Ascorbic acid 97% (as Ascorbic acid 30mg) 30.93 mg, N
icotinamide 2.0 mg,
Cyanocobalamin 1.0% (as Cyanocobalamin 1mcg) 1.0mg,
Calcium Lactate Hydrate (as Calcium 6.5mg) 50.0 mg.
Descote Zinc Oxide 50% (as Zinc 1.0 mg) 2.5 mg
ကလေးအသက်(၅)နှစ်မှ (၁၂)နှစ်အထိ တစ်ကြိမ်လျှင် (၁)ထုပ်မှ (၂)ထုပ်၊ တစ်နေ့လျှင် (၁)ကြိမ်မှ (၂)ကြိမ်။ ရေ၊ ဖျော်ရည်၊ နို့၊ ကလေးအစားအစာနှင့်တကွ ဖျော်တိုက်နိုင်ပါသည်။
Bacillus subtilis, Streptococcus faecium culture material 62.5mg
(As the number of live-bacterial) Streptococcus faecium 2.25x108
Bacilus subtilis 2.50 x 107
Thiamine HCI 0.5mg
Pyridoxine HCL 1 mg
Ascorbic Acid 97% 30.93 mg (As Ascorbic acid 30mg)
Cyanocobalamin 0.1% 1.0 mg (As Cyanocobalamin 1mcg)
Calcium Chloride 50.0 mg (As Calcium 6.5 mg)
၁ ။ အောက်ပါအခြေအနေများနှင့် လူနာများအတွက်ဆေးအားအသုံးမပြုပါနှင့် - ဤဆေးသည် လက်တို့စ် ပါဝင်သောကြောင့် လက်တို့စ်လက်မခံနိုင်သော အခြေအနေ ရှိသော မျိုးဗီဇလက္ခဏာရှိသူများ လက်တေ့စ်ချို့တဲ့သူများ သို့မဟုတ် ဂလူးကို့စ်-ဂလက်တို့စ် စုပ်ယူမှုချို့ယွင်းနေသူများ မသောက်သုံးသင့်ပါ ။ ၂ ။ အောက်ပါလူနာများတွင် ဆေးအားသတိပြု၍ သုံးစွဲရပါမည် ။
(၁) ဆရာဝန်ထံမှ ဆေးကုသမှုခံနေရသောလူနာများ ၃ ။ ယေဘူယျသတိပေးချက် (၁) သတ်မှတ်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးအချိန်အဆအတိုင်းသာ သောက်ရပါမည် ။
(Storage and Shelf Life) Direction for storage - ထားသိုသိမ်းဆည်းပုံအညွှွန်း :
Store in airtight containers at room temperature (1-30ºC). 24 months from the date of manufacture လေလုံသောဘူးနှင့်ထားပါ ။ အခန်းအပူချိန် ၁-၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်းထားပါ ။
Cautions - သတိပြုရန်အချက်များ : ၁။ ပေါင်ဒါအမှုန့်အတိုင်းသောက်သုံးမည်ဆိုပါက ပေါင်ဒါကို ရေအနည်းငယ်နှင့်ပျော်အောင်ပြုလုပ်၍ ဖြည်းဖြည်းသောက်ရပါမည် ။ ၂ ။ ကလေးငယ်၏ အခြေအနေ အရ ဝမ်းသွားခြင်း ၊ပျို့အန်ခြင်း ၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်းစသည့် လက္ခဏာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည် ။ အကယ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာပါက လက္ခဏာများ ပျော်ကသည်အထိစောင့်ပြီး ပေါင်ဒါအနည်းငယ်ကို ပြန်သောက်ရပါမည် ။ အကယ်၍ လက္ခဏမပျောက်သေးပါက ဆေးအချိန်အဆကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမြှင့်၍ သောက်ရပါမည် ။ ၃ ။ ဤဆေးတွင် များစွာသော ပရိုဘိုင်အိုတစ်နှင့်အာဟာရဓါတ်များပါဝင်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ဂရုမစိုက်ပဲကွယ်တွယ်ပါက ပိုးမွှားများ နှင့်တခြား ပြင်ပအရာများ ညစ်ပေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည် ။ အောက်ပါတို့ကို သတိပြု၍ လုပ်ဆောင်ရမည် ။ (၁) အသုံးပြုပြီးတိုင်း အဖုံးကို တင်းကြပ်စွာ ပြန်ဖုံး၍ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းပါ ။ (၂) ဇွန်းကို ရေနှင့်ဆေးပါ အသုံးပြုပြီးပါက စိုထိုင်းမှုမရှိစေရန်ဖယ်ရှားပါ သန့်ရှင်းသော အနေအထားဖြင့် လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းပါ ။